मलेसियामा संकटकाल घोषणा, संसद निलम्बन ! - अन्तर्राष्ट्रिय खबर
मलेसियामा संकटकाल घोषणा, संसद निलम्बन !
कोरखबर २९ पौष, २०७७
पुष २९, एजेन्सी । कोरोना भाइरसको महामारी रोक्नका लागि मलेसियाले संकटकाल घोषणा गरेको छ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री मुहयिदिन यासिनको सिफारिसमा राजा अल सुल्तान अब्दुल्लाले संकटकाल घोषणा गरेका हुन्। यो संकटकाल कोरोनाको अवस्था हेरेर १ अगस्टसम्म वा त्यसभन्दा अघि नै खुुकुलो पनि हुनसक्ने छ।
संकटकाल घोषणाको अर्थ कानूनत संसद् स्वतः निलम्बन हुनेछ। र, प्रधानमन्त्री यासिनले आफ्नै ढंगले सरकार सञ्चालन गर्ने सामथ्र्य राख्नेछन्। सोमबारसम्म यासिनले संकटकालको कुनै संकेतसम्म पनि गरेका थिएनन्। त्यसैले, राजनीतिक वृत्तमा यो निर्णयले ठूलो झट्का दिएको छ।
‘ यो कदमले जनताको व्यक्तिगत सुरक्षा र देशको चासोलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। पछिल्लो कोभिड १९ तथ्याङ्कलाई समेत आधार मानेर यो निर्णय लिइएको हो,’ राजदरबारद्धारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। राजा र प्रधानमन्त्रीबीच सोमबार साँझ भेटघाट भएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
यासिनले यसअघि गत अक्टुुबरमा संकटकाल लगाउन सिफारिस गरेपनि तत्कालीन समय राजाले यस कदमलाई अस्विकार गरिदिएका थिए। त्यतिबेला संसद्मा आफ्नो नेतृत्वमाथि आइलागेको चुनौतीबाट भाग्नका लागि यासिनले स्वास्थ संकटको दुुरुपयोग गर्न खोजेको आरोप विपक्षीहरुले लगाएका थिए।
मलेसियाका पछिल्लोपटक १९६९ मा संकटकाल घोषणा भएको थियो, जतिबेला साम्प्रदायिक दंगाका क्रममा देशको राजधानी शहरमा सयौंको ज्यान गएको थियो। लुटपाट समेत बढेको थियो।
थप अन्तर्राष्ट्रिय खबर
यमनमा मन्त्रिपरिषदका सदस्यलाई लक्षित गरी आक्रमण, २२ को मृत्यु !
नेताहरूसँग भेटघाट गर्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको टोली काठमाडौं आउँने !
इजरायलमा नेपालकै जस्तो हाल : संसद् भङ्ग, दुई वर्षमा चौथो पटक चुनाव हुने !
भुटानमा एक साताका लागी फेरी देशभर लकडाउन !
बाइडेनले लगाए कोरोनाविरुद्धको खोप !
भारतको नयाँदिल्लीमा भूकम्प !
अमेरिकामा मोर्दनाले बनाएको खोपलाई पनि अनुमति !
बाइडेनले आगामी हप्ता कोरोनाको खोप लगाउने !
काबुलमा बम विष्फोट, वरिष्ठ अफगान अधिकारीको मृत्यु !